Cabdisamad Macalin Maxamuud oo caawa lagu jirdilay Guriceel – AfmoNews
Cabdisamad Macalin Maxamuud oo caawa lagu jirdilay Guriceel
Wararka ka imaanaya Magaalada Guriceel ee Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in caawa lagu jirdilay Cabdisamad Macalin Maxamuud, Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha & Amniga Somaliya.
Wasiirka ayaa waxay Ciidanka Ilaalada ee Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ay ku hor jirdileen afaafka hore Hotel Sahal, oo ay ka socotay munaasabad lagu daahfuraayay Jaamacadda Ceynul-Hayat, oo galabta uu xariga ka jaray Madaxweynaha Galmudug, waxaana uu Wasiirka ka mid ahaa masuuliyiintii munaasabadaasi lagu soo casuumay.
Goobjooge ayaa sheegay in Wasiirka uu u socday in uu gudaha u galo Hotel Sahal, balse ay taasi ka hor istaageen Ilaaladii Madaxweynaha. Dood iyo muran ka dib waxaa uu sheegay in ciidankii ay u gacan-qaadeen Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha.
Goobjoogaha oo codsaday inaanan magaciisa Warbaahinta loo adeegsan ayaa Dhacdo.com u sheegay inuu arkaayay ciidanka oo qaybta dambe ee qoryihii ay wateen la dhacaya Cabdisamad Macalin Maxamuud, oo ah wiil uu dhalay Hoggaamiyihii Ahlu Sunna Waljameeca, Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax.
Wafdiga Madaxweyne Qoorqoor oo buuqii bannaanka ka jiray ku soo baxay ayaa bilaabay inay xaaladda qaboojiyaan, iyagoona gudaha hotelka u soo geliyay Cabdisamad Macalin Maxamuud.
Ma jirto cid ka hadashay tallaabada caawa lagu jirdilay Cabdisamad Macalin Maxamuud, oo xilli ahaa dhexdhexaadiyihii Dowladda Federaalka iyo Ahlu Sunadii Gobolada Dhexe, kolka uu khilaaf soo kala dhexgalo.